ब्लमहाउसको 'क्राफ्ट' रिबुटले फिल्मि W लपेट्यो - आईहोरर
घर हरर मनोरन्जन समाचार ब्लमहाउसको 'क्राफ्ट' रिबूटले फिल्मि Wलाई लपेट्यो
ब्लमहाउसको 'क्राफ्ट' रिबूटले फिल्मि Wलाई लपेट्यो
by ट्रे हिल्बर्न III फेब्रुअरी 18, 2020
द्वारा लिखित ट्रे हिल्बर्न III फेब्रुअरी 18, 2020
ब्लमहाउसको शिल्प रिबुट शुटिंग लपेटेको छ। त्यो जेसन ब्लम आफैंमा अरु कुनै पनि अनुसार छैन।
जब सोधेको थियो शिल्प TooFab.com द्वारा, ब्ल्मले भने कि उनले अहिलेसम्म फिल्म देखेका छैनन् र यस बिन्दुमा यसको बारेमा केही पनि जान्दैनन्। उनले भने कि ऊ अर्को दुई देखि तीन हप्ता सम्ममा यो हेर्नेछ।
जबकि ब्लमलाई के थाहा छैन शिल्प रिबूट होल्ड, अभिनेत्री मिशेल मोनाघन ट्वीटरमा केहि समय अगाडि लग्यो र यो उनको संलग्नताको बारेमा भन्न थियो।
म एउटा reimagining भन्नेछु। Zoo बस वास्तवमा स्मार्ट हो र यो सेट मा भइरहेको मात्र एक महान समय थियो। स्पूकी, तर वास्तवमै यो समयको बारेमा र प्रासंगिक पनि छ कि यसको बारेमा हो र उनले कसरी यसलाई पुनः कल्पना गरे। र यो ब्लमहाउस हो र म जेसनसँग अब केही समयको लागि काम गर्न चाहन्छु त्यसैले अन्तमा उनीहरूसँग मिलेर राम्रो काम गर्नु भयो।
कास्टका लागि शिल्प रिबूटमा क्याली स्पेन, गिडोन एडलोन, लोभी सिमोन, जोए लुना, निकोलस गलिट्जाइन, मिशेल मोनाघन र डेभिड डुचोभनी समावेश छन्।
जस्तोसुकै जादू ब्लमहाउसको लागि कलेज भयो शिल्प, त्यस्तो चीज हो जुन म निश्चित रूपमा हेर्दैछु।
तपाईं के सोच्नुहुन्छ? रिबुटको बारेमा उत्साहित? पुन: भ्रमण गर्न उत्साहित शिल्प? हामीलाई टिप्पणी सेक्सन मा थाहा दिनुहोस्।
'शुक्रबार १ 13 औं' छविहरूले जेसनले सीडब्लूको श्रृंखलामा कस्तो देखिन्थे भन्ने कुरा प्रकट गर्दछ
टाइटवाड आतंक मंगलबार - २-२-२१ को लागि नि: शुल्क चलचित्रहरू